श्रीलंकामा शृंखलाबद्ध विष्फोट, दुई सयभन्दा बढीको मृत्यु Globe Nepal News Portal
श्रीलंकामा शृंखलाबद्ध विष्फोट, दुई सयभन्दा बढीको मृत्यु
विदेशी योजना अनुसारको आत्मघाती आक्रमण: सरकार
एजेन्सी,अप्रिल २१ । श्रीलंकाको विभिन्न आठ स्थानमा भएको शृंखलाबद्ध विष्फोटमा परी कम्तीमा पनि दुई सय सात जनाको मृत्यु भएको छ । मारिने मध्ये २७ जना विदेशी नागरिक रहेको बीबीसीले जनाएको छ । बीबीसीका अनुसार विष्फोटमा परी कम्तीमा पनि चार सय ५० जना घाइते भएको छ । विष्फोटमा संलग्न रहेको आशंकामा आठ जनालाई गिरफ्तार गरिएको छ । यद्यपि यो विष्फोटको जिम्मा कसैले लिएको छैन । श्रीलंका सरकारले भने यसलाई विदेशमा बनेको योजना अनुसारको आत्मघाती आक्रमण भनेको छ ।
विश्वभरका क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरुले आज आइतवार 'इस्टर सन्डे' चाड मनाईरहेका बेला श्रीलंकाका विभिन्न चर्च र होटलमा यस्तो आक्रमण भएको हो । श्रीलंकाका सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार,राजधानी कोलम्बोको कोच्चाईकाडे शहरसहित नेगोम्बो र बट्टिकलोआका तीन चर्चमा इस्टर सन्डेका लागि प्रार्थना गरिरहेको बेला यस्तो आक्रमण भएको थियो । एकै समय कोलम्बोका चार होटल र चिडियाखाना नजिक पनि आक्रमण भएको थियो ।
विस्फोट लगत्तै प्रधानमन्त्री रनील विक्रमासिंघेले सुरक्षा परिषदको आपत्कालिन बैठक बोलाएका छन्। अहिले मुलुकभर कर्फ्यु लगाइएको छ भने सामाजिक संजाल प्रयोगमा समेत रोक लगाइएको छ ।
यो विष्फोटमा बेलायत,अमेरिका,टर्की,डेनमार्क,नेदरल्याण्ड,भारत,पोर्चुगललगायतका मुलुकका विदेशी नागरिक मारिएको बीबीसीले जनाएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भने कैयौं अमेरिकी मारिएको जनाएको छ । सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति चर्चमा भएको आक्रमणमा भएको छ । विभिन्न मुलुकका सरकार प्रमूख र राष्ट्र प्रमूखहरुले श्रीलंकामा भएको यो आक्रमणको निन्दा र भर्त्सना गर्दै श्रीलंका सरकारलाई संदेश पठाएका छन् ।
कांग्रेसलाइ ५० बर्ष अब सत्ता सम्हाल्न नसक्ने बनाउँछाैं- मन्त्री याेगेश भटटराइ
अमेरिका चिन विच ब्यापार तनाव झन बढयाे,सेप्टेम्वरदेखि अमेरिकी सामानमा थप कर लगाउने चीनकाे घाेषणा
प्रतिवन्धित साढे २ लाख भारू सहित मिथिलेश कुमार पक्राउ
कम्युनिष्ट नै राजा जस्ता भए,यो ब्यवस्था नै ढल्न सक्छ–प्रचण्ड
सभामुखले दुध चुसाउदै संसद बैठक चलाए
ओलीका डाक्टरले भने–सिंगापुरमा मृगौलाको क्षमता बढाउनेछौं
माधवले ओलीलाइ मुख छाडदै भने–तपाइ.....हो
भारतीय विदेश मन्त्री र प्रधानमन्त्री अेालीविच एक घण्टासम्म के कुरा भयाे ?
प्रधानमन्त्रीले डाकेकाे सर्वदलिय वैठकमा माधव नेपाल किन गएनन ?
माधव नेपालले केपीलाइ दिए कडा टक्कर, अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छाडन चुनाैती
करिश्माले रविकाे समर्थकलाइ किन भेंडा भनिन ?
काठमाण्डाैं,भदाै ७ गते । अमेरिका र चीन विच ब्यापारकाे विषयलाइ लिएर थप तनाव सुरू भएकाे छ।चीनले...
काठमाण्डौं । दुनिया अनौठो छ । दुनियामा अनेक अनेक घटना भइरहन्छन,जसले झन बढी अचम्भित बनाउछ ।...
काबुलमा आतंकवादी हमला, कम्तीमा ६३ को मृत्यु,सैयौं घाइते
एजेन्सी, अगष्ट १८ । अफगानिस्तान राजधानी काबुलस्थित एउटा विवाह समारोहमा भएको आत्मघाती बम...
काश्मिर मुद्धामा चीनले पाकिस्तानलाइ साथ दियाे,दक्षिण एशियामा के हाेला ?
काठमाण्डाैं,साउन २५ गते । भारतले जम्मु र काश्मिरमाथिकाे स्पेशल स्टेटश हटाएर अन्य राज्य जस्तै...
बार्सिलाेनामा नया नियम : अब महिलाले नांगै स्विमिङ गर्न पाउने
काठमाण्डाैं,साउन २३ गते । स्पेनकाे राजधानी वार्सिलाेनाले नया नियम लागु गरेकाे छ।नगरपालिका...
सुषमा स्वराजको निधन
एजेन्सी,अगष्ट ६ । भारतीय जनता पार्टीकी वरिष्ठ नेतृ एवं भारतकी पूर्व विदेशमन्त्री सुषमा...